DDos Concept for Noobs - .::just for share::.
Home » Hacking » DDos Concept for Noobs
DDos Concept for Noobs
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီပိုစ်လေးကိုတော့ Bro MSF REVOLT ရဲ.ဆိုဒ်က ကူးလာတာပါ အရမ်းကောင်းလို.ပါ
ဒါကတော့ ကျနော့် ဆရာလည်းဖြစ် လေးလည်းလေးစားရတဲ့ ကိုရု ရဲ့ ရေးသားထားတာလေးပါ
DDos ကိုနားမလည်သေးသူတွေအတွက်တော့ တကယ် ကောင်းတာမို့ ရှဲလိုက်ပါတယ်
ဒီ Tutorials ကို ဟက်ကင်းကိုလုံးဝမသိသေးသောသူများ DDos ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိစေရန်ရည်ရွယ်ရ်ှရေးသားခြင်းဖြစ်သည်
Education အတွက်ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည် ကိုယ်လုပ်သမျှကိုကိုယ်သာခံရမည် ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ ဟီး
ဒါကြောင့် Localhost မှာစမ်းပြထားတာ မှတ်ပြီလား
ကဲ့ DDos တိုက်တယ်ဆိုတာကြားဖူးပါတယ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကတော့အရင်ကကျွန်တော်လည်း သိပ်ပြီးမသိပါဘူးအခုလည်းဝါးဝါးလေးပါပဲ့
သိတာကတော့ဗျာ Tools တွေဒေါင်းပြီး ip တွေရိုက်ထည့်ချတယ် ပြီးတော့ start ကိုနှိပ်လိုက်တယ် ဒါပဲ့ ပြီးပြီလားဆိုတော့ အင်းပြီးပြီးတဲ့ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ဆိုပဲ့
အမယ်မယ် ဒီလိုမျိုးကျတော့လည်းလွယ်သားဟ လို့စိတ်ထဲ့ကထင်မိတယ်ဟီး ပြီးတော့ Connection စုတ်ပြတ်သတ်နဲ့ကိုယ်တိုက်ထားတဲ့ website ကို reloading လုပ်ပြီး
ကြည့်ရတာလည်းအမောပါပဲ့ website Down သွားပြီးလားဆိုပြီးတော့လေ ဒီကြားထဲ့ connection မကောင်းလို့ Website ကမတက်တာကို ကိုယ်တိုက်လိုက်လို့ကျသွားတယ်လို့ထင်တယ်
ဟီး မှတ်မိသေးတယ် တစ်ခါက အဲလိုမျိုးစမ်းတုန်းက ကိုယ်မှာကလိုင်းကျနေတယ် ကိုယ်တိုက်တာ မှန်ပြီးဆိုက်ဒေါင်းသွားပြီထင်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဒီဆိုက်ဒေါင်းသွားပြီးလားလို့မေးတော့
ဟီး မင်းဆိုက်ကတက်လာလိုက်တာမြန်လိုက်တာတဲ့ ဒါနဲ့နည်းနည်းတော့စိတ်လေသွားတယ် သိပ်မကြာပါဘူးစက်လည်း Hun သွားပြီး Restart ချလိုက်ရတယ်
အသုံးများတာကတော့ Tools တွေသုံးပြီးတိုက်တာများပါတယ် အထူးသဖြင့် Loic လို့ခေါ်တဲ့ DDos Tool ကလူသိများပါတယ် ဒါက စမ်းသပ်ဆဲကာလမို့ လူသစ်လေးတွေသုံးပါတယ်ဟီး
နောက်ပြီး script တွေသုံးပြီးတိုက်ပါတယ် Php သမားတွေက php နဲ့ ddos script တွေရေးကြတယ်
Perl ဆရာကြီးတွေက Perl နဲ့ ddos script တွေရေးကြပြီးတိုက်ကြတယ် နောက်ထပ်အများကြီးပါ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ bot တွေသုံးပြီးတိုက်တယ်
ဒါက တစ်ယောက်တည်းသမားတွေသုံးတာပါ bot ကို Control လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တော်ရုံအရည်ချင်းနဲ့မရပါဘူး Expericence ကတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပါတယ်
အချို့ကတော့ shell တင်ပြီးသား website တွေမှာ php bot တွေကပ်ပြီး ddos တိုက်ကြတယ် အဲဒီနည်းကိုသုံးတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ကိုတော့တွေ့ဖူးတယ် MHU မှာပါ
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ Tutorial က very basic concept ပါပဲ့
Website တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်အားဆိုတာရှိတယ် အဓိကတော့ Server ပေါ့
အဲဒါကိုသာတိုက်နိုင်ရင် အဲဒီ website ဒေါင်းပါပြီ
ဥပမာ ကျွန်တော်က တိုက်တစ်လုံးကို ကားနဲ့သွားတိုက်လို့ရတော့ကားပဲ့ပိန်သွားမှာပေါ့
ဒါပေမယ့် တဲ့တစ်လုံးကိုတိုက်ရင်ကောတဲ့မပြိုနိုင်ဘူးလား ????
သူရဲ့ ခံနိုင်အားအပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်မှသာ DDos ရဲ့အစွမ်းကပိုပေါ်လွင်မှာပါ ဒါကြောင့် Social Engineering ကိုလေ့လာပါလို့ပြောပါ အဲဒါ ရည်းစားများတဲ့သူတွေ ကျွမ်းတယ်
ok ဒါတွေကျွန်တော်စိတ်မ၀င်စားပါဘူး တစ်ကယ်လို့ တိုက်ကိုကားနဲ့တိုက်လို့မပြိုရင် ဟီး လေယာဉ်နဲ့တိုက်ရင်ကော .. ? သေချာတယ်ပြိုမှာ ဟီး
အိုစမာဘင်လာဒင်တောင် လေယာဉ်နဲ့ အမြွာမျော်စင်ကိုဝင်တိုက်တာ မပြိုဘူးလား ဟီး ကြားထဲ့အမျိုးတွေကိုသတိရနေသေးတယ် အဲကောင်လည်းသေပြီ ကောင်းတယ်
ပထမဆုံး loaclhost အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက် xampp ကို စပြီး Run လိုက်ပါ
အောက်ကလိုမျိုး loaclhost run ရင် server တက်လာလိမ့်မယ်
ပြီးရင် RDos Tool လေးကိုဖွင့်ပြီးအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ip => 127.0.0.1 , port => 80ဆိုပြီးရိုက်ထည်လိုက်ပါ
1 မိနစ်လောက်ကြာရင် localhost ကိုပြန်ခေါ်ကြည်ပါဦး မတက်တော့ပါဘူး
Written by cyberoot
I can't attack cos i am offline :)
Credit to=> Downfall(Myanmar Security Forum)